City of Vantaa - 20201120-somali-perusopetus
Waxaan kula talinaynaa ardayda dugsiga sare inay iskuulka ku isticmalaan maaskaraha wajiga (af xir)
Magaalada Vantaa waxay ku talineysaa in ardayda dhigata dugsiga sare ay wajiga soo xirtaan maaskaraha wajiga markay iskuulka dhiganayaan. laga bilaabo 23ka Nofeembar 2020. Isticmaalka maaskaraha wajiga. Isticmaalka maaskarha wajiga ayaa lagula talinayaa ardeyda in ey gaadiidka dadweynaha sidoo kale ku isticmaalaan.
Ardaydu maalintii waxay kahelayaan iskuulka 4 maaskaraha wajiga. Iskuulku wuxuu bixin doonaa tilmaamo ku saabsan sida loo qaybiyo maaskaraha wajiga. Ardayda waa in ey hubiyaan inay haystaan ​​4 xabo maalintii. Maaskaraha waxaa ugu fiican in lagu qaado bac nadiifa oo balaastik ah. Ardaydu sidoo kale waxay isticmaali karaan maaskaraha wajiga ey heystaan haddii ay doonaan.
Tani waa waano, isticmaalka maaskaraha wajiga ma aha qasab, balse waxaan ku dhiirigelineynaa isticmaalka maaskaraha wajiga si wax ku ool ah looga hortago faafitaanka cudurka 'Covid-19'.
Maaskaraha wajiga qaabka loo isticmaalo:
Maaskaraha wejigaaga saar ka hor intaadan iskuulka imaan. Badal maaskaraha haddii aad iska bixiso inta u dhexeysa ama haddii maaskarahu ay qoyso ama wasakh tahay. Nadiifi qacmaha ama jeermis dilaha gacmahaaga mari ka hor inta aadan wajiga saarin maaskaraha. Maaskaraha la isticmaalay waxaa lagu ridayaa qashinka isku qasan.